Nin aroos ahaa oo laf dhabarta ka jabay ka dib markii ay saaxibadiisa hawada sare ka sii daayeen | Star FM
Home Warbixino Dheeraad ah Nin aroos ahaa oo laf dhabarta ka jabay ka dib markii ay...
Waxa loo malaynayay inay tahay habeenkii ugu fiicnaa noloshiisa ayaa dhalanteed ku noqday nin dhallinyaro ah oo reer Romania ah, ka dib markii hawada sare laga soo tuuray oo ay saaxiibbadiisa sidaasi yeeleen habeenka arooska , isla markaana uu ka jabay laf -dhabarta.
31-jirka lagu magacaabo Liviu Filimon wuxuu ku raaxeysanayay xafladda arooskiisa ee deegaanka Baile Felix, waqooyi-galbeed Romania markii qaar ka mid ah saaxiibbadiis ay go’aansadeen inay la dabaal dagaan oo ay kor u tuuraan.
Waa caado caan ka ah adduunka oo dhan, laakiin si looga fogaado musiibo, waxaa muhiim ah in qofka hawada loo tuurayo sidoo kale la qabto isagoo hoos ku dhicin.
Nasiib darrose, arrintu ma aysan noqon sidii loogu talagalay , oo ninkii arooska ahaa ayaa dhulka ku soo dhacay isla markaana ka jabay dhowrn laf waxaana loola cararay isbitaalka.
Muuqaal ku baahay baraha bulshada ayaa lagu arkayay 31 jirka arooska ah oo saaxiibbadiis ay soo qaadayaan isagoo ku soo socda dhanka goobtii qoob-ka-ciyaarka, ka dibna hawada lagu tuuraya.
Waxay ku guuleystaan inay qabtaan markii ugu horreysay, laakiin markii labaad isma waafajinin dadaalkooda, taasoo keentay in Liviu uu u duulo hal dhinac oo uu dhulka ku dhufto dhabarkiisa.
Nasiib darro, saaxiibbadiis waxay sameeyeen qalad kale markii ay soo qaadeen ninkii arooska ahaa ee dhaawacmay oo ay kursi ku fadhiisiyeen, halkii ay kaga tegi lahaayeen goobtii uu jiifay si amblaasku ama baabuurka gurmadka degdega u qaado.
Nasiib wanaag, xaaladda Liviu ayaa soo hagaagtay habeenimadii, wuxuuna dib u helay dareen labada lugood ah.
Wali, dhakhaatiirtu waxay wariyeyaasha u sheegeen inuusan weli ka bixin kaynta oo uu weli ku jiro isbitaalka qaybta qalliinka neerfayaasha. Waxaa lagu waday inuu maro baaritaanno dheeri ah toddobaadkan.
Sheekada Liviu waxay ku faaftay Romania, ka hor inta aysan soo qaadin warbaahinta caalamiga ah. Baraha bulshada, dadku waxay si cad u eedeeyeen ragii hawada ku tuuray.
Previous articleDHAGEYSO:Shacabka Dadaab oo loogu baaqay inay qaataan kaararka codeynta
Next articleDadkii laga musaafuriyay Laas-Caanood oo lagu soo dhaweeyay Beledweyne